Hal qodob oo leysku mari la’yahy & Khilaafka baarlamaanka oo cirka isku shareeray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hal qodob oo leysku mari la’yahy & Khilaafka baarlamaanka oo cirka isku shareeray
Ahmed weheliye Gaashaan 3 April 2018
muqdisho ( mareeg news ) madaxweyna jamhuriyada soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalintii sabitida aheed codsaday in la joojiyo kulanka baarlamaanka federalka soomaaliya ayaa waxa ay wararka sheegayaan in uuna u wajihin xalinta khilaafka u dhaxeeya xukuumada iyo baarlamaanka sidii loobaahnaa.
madaxweeyna iyo risuul wasaaraha oo uu ka dhaxeeyo xiir waangas ayeey wararka sheegayaan ineey isku mowqif ka yihiin in laanta fulinta ay iska hor leexiso cadaadis kasta oo uga imaanaya laanta sharci dajinta oo ah baarlamaanka.
qodobka ugu muhiimsan ee leeysku mari la’yahy ayaa ah in khilaafka lagu xaliyo isku shaandheen lagu sameeyo golaha wasiirada farmaajo ayaa xal u arka in uu wasiiro siiyo mucaaradka si loo dhameeyo khiilfka lakin raisul wasaare kheyre uma arko arintaas xal.
jawaari ayaa sheegay in aaneey xildhibaanudu ku qancee warkaas loona baahnyahy in isbadal muuqda la seemo,
xildhibaanada ka soo horjeeda siyaasada rasuul wasaare kheyre ayaa sheegay ineey ku qanci karaan kaliya in labadalo raiisul wasaaraha oo la keeno qof kale oo dhex dhexaadin karta baarlamaanka iyo laana fulinta.
xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ayaa sheegay in laanta fulinta mar hore ay gacanta ku dhigtay laanta cadaalada hadana ay ku taameyso ineey qabsato laanta sharci dajinta loona baahanyahy in laga bad badiyo madxaweynaha iyo siyaasiyiint ka ag dhaw ayaa aaminsan faragelinta madaxweynaha iyo go’aan qaadashidiisa ineey wax badan ka badali karto xaalada murugsan ee ka dhex taagan laanta sharci dajinta lakin madaxweynuhu ay daacad ka eheeyn arintaas.
waxaa shaki badan abuurayay aamusnaantii madaxweynaha hadana waxaa muuqaneysa joojintiisa kulanka baarlamaanka kadib inuu sidiisii uga aamusay, QM iyo midowga afrika waxeey qireen in xaalad khatar ah ku sugantahy somaliya Hadii xal laga gaari waayana ay cuur yaamin ku tahay howlihii lagu baadi goobayay xasi loonida iyo dowladnimada soomaaliya 10 kii sano ee lasoo dhaafay.
Mohamed Bin Salmaan “Israaiil waxeey xaq u leedahay ineey hesho dal”